Zvakanaka Here Kuti vaKristu Vashandise Zvokuzvidzivirira Kubata Pamuviri? | Mibvunzo yeBhaibheri
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Zvakanaka Here Kuti vaKristu Vashandise Zvokuzvidzivirira Kubata Pamuviri?
Jesu haana kurayira vateveri vake kuti vave nevana kana kuti vasava navo. Pavadzidzi vaJesu hapana kana mumwe chete akambopa murayiro panyaya iyi. MuBhaibheri hapana panoratidza kuti zvakaipa kushandisa nzira dzokuzvidzivirira nadzo kubata pamuviri. Panyaya iyi, zano riri pana VaRoma 14:12 rinoshanda iro rinoti: “ Mumwe nomumwe wedu achazvidavirira kuna Mwari. ”
Vakaroorana vakasununguka kuzvisarudzira kana vachida kuita vana kana kuti kwete. Vachasarudza kuti vanoda vana vangani uye vachavaita riini. Kana murume nomudzimai vakasarudza kushandisa nzira yokuzvidzivirira kubata pamuviri isiri yokubvisa pamuviri, ichocho chisarudzo chavo uye ndivo vachazozvidavirira. Hapana anofanira kuvatonga.—VaRoma 14:4, 10-13.
Kuchinja Kunoita Zvinhu Murume Nomudzimai Pavanova Nevana
Ona kuti zvinotaurwa neBhaibheri zvingabatsira sei vabereki kuti vajairane neupenyu hutsva uhwu.
VaKristu Vanofanira Kushandisa Nzira Dzokuzvidzivirira Kuti Vasabata Pamuviri Here?
Bhaibheri Rinoti Chii Nenyaya Yokubvisa Pamuviri?